MUQDISHO, Soomaaliya - Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya, Xasan Cali Khayre ayaa wuxuu difaacay olalaha ay waddo dowladda kaasoo lagu xirayo masuuliyiin, kuwaasoo lagu soo eedaynayo masuq-maasuq iyo lun-sashadda Hantida Qaranka.
Wasiirka koowaad ee xukuumadda oo hadal ka jeediyay munaasabadda Maalinta Dhalinyaradda aduunka ee 12-ka Agoosto oo lagu qabtay Muqdisho ayaa tilmaamay in dowladdu ay gacan bir ah ku qaban doonto cid walba oo wax is-dabamarin lagu helo.
"Hadii aad tahay Wasiir ama cid kale oo xil u haya dowladda, oo aad ku fekerayso inaad lun-sato Hantida Qaranka, waan kuu sheegaynaa ina adan Calfan doonin. Dowladda Soomaaliyeed way ka go'an ka dagaalanka musuq-maasuqa," ayuu Khayre xusay.
Hadalka Khayre ayaa kusoo beegmayaa xili todobaadyadii udambeeyay uu xawaarre sare ku socday olalaha dowladdu kusoo xireyso masuuliyiin sarre oo dowladda ka tirsan, kuwaasoo musuq-maasuqa iyo ku tagri falka Hantida Qaranka lagu soo eedeeyay.
Inta la ogyahay waxaa haatan ku jira xabsiga saddex mas'uul oo ka tirsan dowladda kuwaasoo labo kamid ah ay yihiin saraakiil ka tirsan Booliska, halka shaqsiga kale oo uu yahay Agaasime Waaxeed ka tirsan Wasaaradda Gargaarka iyo musiibooyinka.
Intaas waxaa dheer, inuu jiro Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda, kaasoo shaqa joojin lagu sameeyay dhwaan kadib markii lagu soo eedeeyay musuq-maasuq, islamarkaana todobaadkii hore looga yeeray Maxkamad.
Farmaajo ayaa saaka ka baaqday inuu Salaadda ku tukado Masjid si weyn looga sugayay...
BAARITAAN: Musuqmaasuq lagu sameeyey Mashruuc Bangiga Horumarinta Islaamka ka qabanayey Soomaaliya
Soomaliya 11.09.2018. 23:46
Magaalooyin ku yaalla Soomaaliya oo Fatahaad looga barakacayo [Daawo]
Soomaliya 28.04.2018. 18:06
Beyle oo hadlay caqabadaha daabicista lacag cusub iyo musuq-maasuqa
Soomaliya 26.11.2018. 23:59